कोरियामा मृत्यू भएका गगनको बैशाख मा विहे गर्ने योजना, उनकी प्रेमिकाले लेखिन यस्तो मनै छुने स्टाटस ! - हाम्रो देश
कोरियामा मृत्यू भएका गगनको बैशाख मा विहे गर्ने योजना, उनकी प्रेमिकाले लेखिन यस्तो मनै छुने स्टाटस !
काठमाडौं : इपिएस प्रक्रिया मार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया आएका सुर्खेत, चौकुने– ४ बिजौराका गगन रावलको सोम बार राति नि’धन भएको थियो । हृदय घा’तका कारण सुर्खेतका गगन रावलको कोरियामा मृ,त्यु भएको सुर्खेत समाज दक्षिण कोरियाले जानकारी दिएको थियो । उनको मंगलबार राति स्थानीय समय अनुसार साढे २ बजे मृ,त्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो । दक्षिण कोरियामा ४ वर्ष १० महिना बसि सकेका उनी अप्रिलमा नेपाल आउने योजनामा थिए । उनकाे मृ,त्यू पश्चात उनकी प्रेमिका ले उनलाई लेखेको मन् छूने यो स्टाटस ले सारा नेपालीको मन रुवाएको छ ।
कान्छु पिलिज़ आउन फर्किएर हामी बैशाख मा बिहे गर्ने भनेको होइन र किन यस्तो गरेउ किन छोडेर गयौ दैब पनि कति निस्तुरी रहेछ चोखो माया गर्ने लाई कहिले साथमा बाच्न दिदैन अरु म के लेखु मा निशस्ब्द छु योकुरा झुटो हो भने नि हुन्थोयो कसैलेRIP
hamro des 21 मिनेट अगाडि